ACCUGENCE ® PRO Multi-Monitoring System (ညနေ ၉၅၀)
ယုံကြည်စိတ်ချရသောပံ့ပိုးသူ Needleless Glucose Monitor - UBREATH ® Wearable Mesh Nebulizer (NS180, NS280) -e-Linkcare
သကြားမီတာဖတ်ခြင်းအတွက်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ - UBREATH ® Spirometer System (PF280) -e-Linkcare
Dario Smart Meter အတွက်စက်ရုံခွဲများ - UBREATH ® Wearable Mesh Nebulizer (NS180, NS280) -e-Linkcare
အသစ်ရောက်ရှိလာသောတိကျသောသွေးဂလူးကို့စ်မီတာ - UBREATH ® Wearable Mesh Nebulizer (NS180, NS280) -e-Linkcare
တရုတ်စျေးနှုန်းချိုသာသောအဆက်မပြတ်ဂလူးကို့စ်မီတာ-UBREATH ® Multi-Function Spirometer System (PF810)-e-Linkcare
စက်ရုံစျေးနှုန်းအကောင်းဆုံး Blood Glucose Meter - UBREATH ® Spirometer System (PF680) -e-Linkcare
တရုတ်စျေးသက်သက်သာသာ Hba1c ဆီးချိုရောဂါ - UBREATH ® Spirometer System (PF680) -e-Linkcare
Breath Biomarker အတွက်အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်း - UBREATH ® Wearable Mesh Nebulizer (NS180, NS280) -e-Linkcare
ACCUGENCE ® PRO Multi-Monitoring System (Model No. PM 950) သည်ပွဲလမ်းသဘင်၏အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုကိုကူညီရန်ကျယ်ပြန့်သောဆေးရုံရောဂါရှာဖွေမှုအတွေ့အကြုံ၊ ဆက်သွယ်မှုဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ပြည့်စုံသောအရင်းအမြစ်များကိုအတူတကွသယ်ဆောင်လာသည်။
ACCUGENCE ® PRO Multi-Monitoring System (Model No. PM 950) ကို Glucose (GOD), Glucose (GDH-FAD), Uric Acid နှင့် Blood ketone တို့ကို e-LinkCare Meditech co ။ မှထုတ်လုပ်သောတူညီသော strips များဖြင့်စမ်းသပ်ရန်ရရှိနိုင်ပါသည်။ LTD ။ စနစ်များသည်ဓာတ်ခွဲခန်းတိကျမှုနှင့်ချက်ချင်းရလဒ်များပေးသည်။ ဤစနစ်များလက်၌သင်၌ကျွမ်းကျင်သောအသုံးပြုသူအခြေအနေတွင်အကဲဖြတ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းတို့ကိုစီမံနိုင်သောပြီးပြည့်စုံသောအချက်-of-care စမ်းသပ်မှုအစုစုရှိသည်။
ACCUGENCE ® PRO Multi-Monitoring System (Model No. PM 950) သည်ကျွမ်းကျင်သောအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုကိုကူညီရန်ကျယ်ပြန့်သောဆေးရုံရောဂါရှာဖွေမှုအတွေ့အကြုံ၊ ဆက်သွယ်မှုဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ပြည့်စုံသောအရင်းအမြစ်များကိုအတူတကွယူဆောင်လာသည်။
Calibration တစ်ခုပြီးမှ Auto Strip အသိအမှတ်ပြုသည်
Touch screen သည်သတင်းအချက်အလက်များအလွယ်တကူ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်ခွင့်ပြုသည်
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဆက်သွယ်မှု (WiFi နှင့် HL7)
ထုတ်ကုန်အမည် ACCUGENCE®️ PRO Multi-Monitoring System
မော်ဒယ်နံပါတ်။ ညနေ ၉၅၀
ကန့်သတ်ချက် သွေးဂလူးကို့စ် (GOD & GDH)၊ β-Ketone (KET) နှင့် Uric Acid (UA)
တိုင်းတာခြင်းအကွာအဝေး GLU: 0.6 ~ 33.3 mmol/L (10 ~ 600mg/dl) KET: 0.0 ~ 8.0 mmol/LUA: 3.0 ~ 20.0 mg/dL (179 ~ 1190 olmol/L)
Hematocrit အကွာအဝေး GLU နှင့် KET：10% ~ 70% UA: 25% ~ 60%
နမူနာ GDH, KET နှင့် UA: လတ်ဆတ်သောသွေးကြောမျှင်တစ်ခုလုံးသွေးနှင့်သွေးပြန်ကြော BloodGOD: လတ်ဆတ်သောသွေးကြောမျှင်သွေးတစ်ခုလုံး
ဉာဏ် ၂၀၀၀ စမ်းသပ်ရလဒ် ၅၀၀၀ စစ်ဆင်ရေး ID ၅၀၀၀ လူနာ ID100 စမ်းသပ်အချပ် ၃၀ QC စာရေး ၃၀
မီတာအရွယ်အစား 158 * 73 * 26mm
Display အရွယ်အစား ၈၇*၅၂ မီလီမီတာ (၄ လက်မရောင်စုံ touchscreen)
စနစ် Android စနစ်
user interface ကို Touchscreen နှင့် barcode scanner
ထည့်သွင်းဗို့အား +5V DC
ပါဝါအရင်းအမြစ် 3.7V Lithium-ion အားပြန်သွင်းနိုင်သောဘက်ထရီ
သိုလှောင်မှုအပူချိန် -20-50 ºC (-4 ~ 122ºF)
Operating အပူချိန် GLU & KET: ၅ - ၄၅ ºC (၄၁ - ၁၁၃ºF) ယူရစ်အက်စစ်: ၁၀ - ၄၀ ºC (၅၀ - ၁၀၄ºF)
လည်ပတ်မှုစိုထိုင်းဆ ၁၀ မှ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း
ဆက်သွယ်မှု WiFi နှင့် HL7
ယခင်: ACCUGENCE ® LITE Multi-Monitoring System (PM 910)
နောက်တစ်ခု: ACCUGENCE ® ဘက်စုံစောင့်ကြည့်စနစ် (PM ၉၀၀)
ACCUGENCE ® Blood Glucose Test Strip (Glucose Ox ...
AccuGENCE ®ဟေမိုဂလိုဘင်စမ်းသပ်ခြင်း (SM511)
အခမဲ့သွေးချိုစစ်ဆေးခြင်းကိရိယာ, အစာရှောင်ခြင်းသွေးသကြား ၁၀၀, သွေးချိုစမ်းသပ်စက်, သကြားစစ်ဆေးစက်သည်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်သည်, ၅.၂ သွေးသကြား, Pneumotachograph Spirometer,